Inline Atc Cnc Machine, Woodworking Atc Cnc Machine, Cnc Kudura Muchina- JCUT
ATC huni cnc router muchina
Wood cnc router muchina
Inowanikwa muJinan, Shandong Province, Jinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd (JCUT-CNC) iri yakakwira-tech CNC bhizinesi inoshandira (yakagadzirirwa) phan ...
Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira zvakakwana otomatiki kurodha uye kuburitsa CNC yekucheka muchina, mana maitiro cnc yekucheka muchina, inline ATC cnc muchina ...
Hwemhando yepamusoro, Nyanzvi nyowani, Kugadziridza, uye Runako mushure mekutengesa-basa. Inopa yakakwirira-yepamusoro uye yepamusoro CNC yekuvezwa michina kune pasirese.
1325 ina spindle ine tambo ATC
Mashini kutsanangurwa 1. Kutemwa, kusona, kukweva, kuveza (kunyorovera modhi). Maitiro mana aya anogona kushandiswa kune ese maviri kutemwa kweekhabati uye kabatiji gonhi kugadzira. Uchishandisa yakakwira otomatiki shanduko yekuchinja chirongwa, chirongwa ichi choga chinogadzirisa zvinoda kugadziriswa pasina kunyorwa kwebhuku. Multiple spindles anoshanda panguva imwe chete, kunyatsogadzirisa kugadzirisa mashandiro. 2. Yakashongedzwa neyakavhomorwa adsorption tafura, iyo pombi yekufumisa inogona kunyatso adsorb zvishongedzo zvehukuru hwakasiyana, uye ...
ATC huni cnc 1325
Mashini ekutsvagisa 1. Maturusi gumi nemaviri akachengeterwa magazini emagetsi otomatiki, uye maturusi gumi nemaviri anogona kuchinjirwa zvakasununguka kuti asangane nemasimba ekugadzirisa zvinhu. 2. Mune yekupedzisira kuongororwa, izvo zvakanakira lamino opener zvinounzwa ne lamino isingaonekwe yekubatanidza musangano musangano unogona kuongororwa. Izvo zvakanakira zve lamino zvisingaonekwe zvinobatanidza zvinoita kuti lamino kuvhura iwedzere kufarirwa. Kuenzaniswa nemamwe mafomu asingaonekwe emhando, fomu yemusangano ...
Eupfumi mana anogadzira R4 huni yekucheka muchina
Machine Shanduro 1. Iyo ina-yekuita otomatiki yekucheka uye yekuvhura muchina yakagadzirirwa vatengi kuti vakwanise kushanda zvakanaka. Misoro mina inodzorwa nema cylinders uye inogona kuchinjirwa zvisina musoro, iyo inogona kupedzisa zviri nyore mapurogiramu mazhinji akagadziridzwa nemutengi (kugadzirisa mashandiro emuchadiki kunoda shanduko yechishandiso mukati mezvipenga zve 2-4), Iri rinoponesa rinoshungurudza bhuku rebato pakati nepakati yakakodzera zvigadzirwa zvemaitiro mazhinji mukugadzirwa kwemasuo emapuranga, fenicha uye mus ...
New dhizaini mana spindle ATC huni cnc router
Mashini kutsanangudza 1. Mutengo wakaderera: wakakodzera madiki nepakati - hukuru fenicha yemafenicha. Kunyangwe yakakwira-kumagumo zviuru gumi nezvitatu kusvika kumakumi mana ezviuru-CNC musina wekushongedza muchina wakaderera mumutengo uchienzaniswa nemuenzaniso neyekudonha bhegi. Chisarudzo chakanaka chemaficha emaficha ane yakawandisa kumanikidzwa kwemari. 2. Door panji kabhoni kabiri-kushandisa: Kubva pane mamiriro echitarisiko, iwo maitiro mana ndeane akapusa chishandiso chinja modhi, iyo inoshandisa ina spindles kuziva ...
1325 disc chombo paatc cnc router
Machine Shanduro 1. Yakanyanya kushanda: akawanda spindle motors anoshanda panguva imwe chete, anogona kupedzisa kugadzirwa kwezvakagadzirwa muhukuru. Yepamusoro otomatiki chishandiso dhizaini chirongwa, hapana bhuku rekupindira, chirongwa ichi chinoitwa pakarepo. Kushandisa yepasi rese inotungamira tekinoroji vacuum adsorption tafura, yakashongedzerwa nehuputi pombi ine yakasimba adsorption kukwanisa, ina-zone dhizaini, yakasimba adsorption yenzvimbo dzakasiyana dzezvigadzirwa, inovandudza zvikuru kushanda kwebasa. Kukurumidza t ...
Atc yemuchina wemuchina
Machine Mashandisirwo 1. Uyu muchina unoshandisa GDZ kana HQD mhando Air Kutonhora Spindle. 9kw yakakwirira simba spindle, yepamusoro yekugadzirisa mashandiro. Uchishandisa yakakwira otomatiki shanduko yekuchinja chirongwa, nekukurumidza shanduko yekushandisa. 2. Yakagadzirirwa servo mota, yakakwira-chaiyo giya uye inosvitswa rack drive, inoita kuti muchina umhanye yakasimba, uine ruzha ruzha, kumhanya mhanya uye kwakakwirira kuita panzvimbo kwayo. 3. Yakakomba-basa kukwegura kukwikwidza mubhedha (mashanu-akasendamira chigayo ekudonha kuchinjisa 0.02mm). 4. Machining maitiro e synchronous beam mubhedha ...
Muchina Tsanangudzo 1. Kugadzika kwechimiro: iyo simbi simbi yose yakagadzirwa pamwe, iyo inobatwa ne vibration (tempering) kukwegura, uye hapana deformation mushure mekushandiswa kwenguva yakareba. 2. Taiwan Syntec yekumusoro-inoshanda maindasitiri ekutonga sisitimu, iine yakagadzika mhando mhando, kugadziriswa kwakanaka, inogona kudzora kupedzisa ye-musana-safu 3D kuseenzesa, inokurumidza, yakatsetseka 3D kugadzirisa, kutema uye kucheka. 3. Spindle mota inounzwa kubva kuItaly HSD yakakwirira simba mweya-yakatonhorera toni svumbunuro, kukwirira kwakanyanya, ...
Mashini Shanduro 1. Kuita mabhuru, kudhirowa, kucheka, kutungamira, kugaya, nezvimwe, kuchinjisa musoro kutenderera pasi pe banga, banga richichinja maitiro pasina kukanganisa, kuwana automation. 2. Kudzora dhizaini dhizaini kudhirowa, benzi basa, vashandisi vanogona kunge vari pabasa mushure mekudzidziswa kuri nyore, hapana basa revashandi vehunyanzvi.Muchina unofamba nimbly, iko kushanda kwacho kuri kwakakwira, inokubatsira iwe kuona kusvetuka kwechigadzirwa. Muchina uyu unogamuchira HQD yakakwira simba mhepo-yakatonhorera spindle, yakazara sevhisi ...
Izvo zvakanakira CNC yekucheka muchina
CNC yekucheka muchina, inozivikanwawo seyangwara plate fanicha yekugadzira machira. Sezvinoreva zita iri, nzira dzese kubva pakutakura, kucheka, yekumhanyisa gomba rekudonha nekuvhara ndiro yacho kwapera mukuenda kumwe. Iyo inonyats kutsiva kugadzirwa kwemanyoro uye kugadzirisa. Saka, chii chiri ...
JCUT CNC router muchina wekugadzirisa ruzivo
Dambudziko rechinyakare nderinoti: 1. Kuisa muchina usina kumbochengetwa: gwara rechitima rinotsvedza rakanyatsoiswa, muchina wekumhanyisa unononoka, basa rekuita harina kunaka, hupenyu hwomushini hahuna kunaka, iyo axis yeZ inomira, dhayiri kukanganisa kwakakura, uye kona yekusarudza haina kunaka! Mutya ...
R9 yakatevedzana CNC yekutyaira muchina R9 inoteedzera CNC yekuchina muchina: Mashini inoshanda indasitiri: yekucheka slot punch inogona kushandiswa pakugadzirisa bhodhi mhando fenicha inofamba yekuenzanisira yekugadzirisa kabati gonhi gonhi gonhi gonhi bhegi rakapetwa chaiyo huni hwomukati musuo solidhuni yemadziro fenicha kombiyuta. R7 dzakatevedzana CNC ...
KUFUNGA KWEMAHARA +8618006360664
KUFUNGA KWEMAHARA +8615863173380